G U CH I I
Guchiiwwan akaakuu allattii keessaa tokkodha. Amaloota addaa ittiin beekamanis kan mataa isaanii qabu. Akkasumas, jireenyaaf bakka adda ta’e kan filatanidha. Kana malees, guddina dinagdeefi hawaasummaa keessatti bakka guddaa qabu.
Guchiiwwan allaattiiwwan biroorraa adda ittiin beekaman hedduu qabu. Isaan keessaa inni tokko dheerinaafi ulfaatinasaaniiti. Dheerinni isaanii giddu galeessaan meetira lamaafi walakkaa ol yoo ta’u, ulfaatinni isaanii ammoo giddu galeessaan hanga kiiloogiraama dhibba tokkoofi shantamii torba ta’uu danda’a. Sababa ulfaatinasaaniifis akka allaattiiwwan biroo balali’uu hindanda’an. Inni biroon ammoo qallina mormasaaniifi mormi guchii qallaa yoo ta’u, iji isaanii fageenyarratti arguu danda’a. Qallinni morma isaanii diinni akka isaan hinagarre kan gargaaru yoo ta’u, dheerinni morma isaaniifi jabinni ija isaanii fageenyarraa itti dhufu akka arguu danda’an taasisa. Amalli guchii inni sadaffaan, sa’a tokkotti kiiloomeetira jaatamaa hanga torbaatamaatti lafarra fiiguu danda’usaati. Umuriin guchii giddu galeessaan waggaa afurtamaa hanga shantamaa ta’uu danda’a.
Guchiiwwan jirenyaaf bakka filatan qabu. Iddoon walqixxaataafi diriiraan lafa isaan jireenyaaf irra caala filatanidha. bakka cirrachaafi margi guutes daran jaallatu. Sababiinsaa, soorataaf marga waan fayydamaniifidha. Kanaafuu, akka isaan bilisummaan wal horaniifi jiraatan taasisuuf lafa diriiraafi marga qabu adda baasuufiin murteessaadha.
Guchiin kormaafi dhalaan kan ittiin gargar ta’an amala addummaa mataa ofii niqabu. Lamaanuu bifa koolasaaniitiin adda baafamu. Inni kormaan koola isaarratti bifa gurraachaafi adii kan qabu yoo ta’u isheen dhaltuun ammoo koollishee daalachadha. Bifa baallee isaaniitiin gargar baasuun kan danda’amus kanneen umuriin isaanii waggaa tokkoo gadii qofadha. Gama biraatiinis, guchii dhaltuun marsaa lamaa hanga sadii buuphaa buusuu dandeessi. Baay’inni buuphaa marsaa tokkotti isheen buustus digdamaa hanga soddomaatti ta’uu danda’a. Ulfaatinni buuphaa tokkoo giddugaleessaan hanga ulfaatina buuphaa lukkuu digdamii afurii gaha. Kunis, buphaan guchii tokkichi hanga kiiloogiraama 1.6 ulfaachuu danda’a jechaadha. Guchiin altokkichatti buuphaa tokkoo hanga kudhanii haammachuu dandeessi. Wuicii (cuucii) yaasuufis guyyaa afurtamii lama itti fudhata.
Karaa birootiin, guchiiwwan guddina dinagdeefi hawaasummaa karaa birootiin keessatti bakka olaanaa qabu. Fakkeenyaaf, gogaan isaanii boorsaa, uffata, saqqiifi meeshaalee faaya manaa ta’uu danda’a. Baalleen isaanii ammoo firaashii, boraatiifi haxooftuu ittiin hojjechuuf dhimma baasa. Akkasumas, paarkiiwwan addaa addaa keessattis gama daawwannaatiin galii guddaa argamsiisuu danda’u.
Dimshaashumatti, guchiin akaakuu allattii keessaa tokkodha. Amaloota addaa ittiin beekaman mataa ofii qabu. Jireenyaafis bakka diriiraa, cirrachaafi margaan guute filatu. Guddina dinagdeefi hawaasummaa keessattis bakka olaanaa waan qabaniif kunuunfamanii akka jiraatan gochuun barbaachisaadha.
BEEKAN GULUMMAA IRRANAA MARDAASAA ti.